Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ကလေးမချစ်တတ်ပါ.. သို့သော်..
Writer Sein Lyan Time 9:32 am
ဘာ.. ပုံစံသွင်းပြီးချစ်မယ်.. ဟုတ်လား.. မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကရင်ဖိုးစိန်ရယ်.. ကျုပ်က ကိုယ်တွေ့တော့.. သူကတောင်ပြန်ပြီး ကိုယ့်ကို ပုံစံသွင်းသွားလိမ့်ဦးမယ်.. စောင့်ကြည့်ရသေးတာပတော်.. :D
ငယ်ငယ်က ဆို ကိုယ့်မိသားစု မှ ကိုယ့်မိသားစုလို့ထင်တာဗျ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလဲ သိပါတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ယှဉ်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေအပေါ် တကိုယ်ကောင်းဆန်းမိတယ်။ :)
ဒါပေမယ့် မိသားစုအတွက် တကိုယ်ကောင်းဆန်မိတယ်ဆိုတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းသာပါသေးတယ်။
ညီမလေး ခုအချိန်မှာ အင်္ဂါအစုံလင်နဲ့ အသက်ရှင်နေတာ ဘုရား မ လို့နော်
သားယောင်္ကျားလေးအရင်လိုချင်တယ်လို့ အမြဲစဉ်းစားခဲ့တာ.. သမီးလေးကို စောင့်ရှောက်ရအောင်ပေါ့.. စိန်တို့ညီအကိုကြောင်းဖတ်ပြီး သမီးပဲ အရင်မွေးရမလို ဖြစ်နေပီ
I still can't tolerate the kids with the attitude. I am willingly to accept the fact that I can be selfish, egoist, or self-centered, but can't keep my mouth shut, when they are running to and fro in the airplane.
Oui, C'est sûr !Mon petit
အင်း.. အငယ်မက.. ဒါကြောင့် ဒီလောက် အကိုတွေကို ကြောက်တာ နေလိမ့်မယ်....
ကိုယ့်သွေး ကိုယ့်သားကိုမှ ချစ်ခင်တတ်တာ.. သဘာဝပါ....
ကိုယ်ကတော့ ဘယ်အရာနဲ့ ယှဉ်ယှဉ် မိဘက နံပါတ်တစ်... မောင်နှမတွေက နံပါတ်နှစ် ပဲ...။
အဲဒီအတွက် အတ္တကြီးတယ် ပြောလဲ ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေလိုက်အုံးမှာ...။
ကိုယ်ကတော့ ခလေးတွေကို ချစ်တတ်တယ်။ စိတ်ရှည်တယ်..။ အိမ်က ညီ၊ ညီမတွေရော.. ရပ်ကွက်ထဲက ခလေးတွေရော... ကိုယ် ထိန်းတယ်။ ပုံပြောတယ်။ ပျော်အောင်ထားတယ်။ အဲ.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မောင်နှမကိုတော့ လာမထိနဲ့..။ ခလေးသော လူကြီးသော နားမလည်ဘူး။ နာဘီသာ မှတ်။
ချစ်ညီလေး မျောက်စိန် ခလေးတွေ ကိုမောင်ဟန် ထိန်းပေးမယ်ဗျာ..... များများသာမွေး....
မျောက်စိန်လို မျောက်ရှုံးအောင် ကမျင်းရင်တော့ ကိစ္စန မရှိပါဘူး...အဲ.. ဒါပေမဲ့ ဦးစိတ်တို တို့ ဒေါ်ဒေါသ တို့ ထွက်လာလို့ကတော့ အပိုး မကျိုးရင် ဇက်ချိုးပလိုက်မယ်......
7 October 2010 at 17:00
ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ ညီမလေးကံကောင်းသွားတယ်နော် အဖွားရောက်လာလို့...ဒီပို့ဖတ်ပြီးမှဘဲ ကိုဖိုးစိန် ခလေးတွေရမှ ဘယ်လိုနေမလဲ စောင့်ကြည့်ဦးမယ်...
ကိုကြီးစိန် ညီမတော့ တော်ထားတယ်မလား...
ဒါမယ့် အင်ဂျင်ဝိုင်တော့ မသောက်ဘူးနော်...
နာ့ကလေး ရဲ့ ဂေါ့ဖားသား နင့်ကိုပေး မလုပ်ဘူးးးးးးး
အဲ့ဒီလို ကိုဖိုးစိန်လို ကလေးမချစ်တတ်တဲ့ ကျနော့်ဘကြီးတယောက်လဲ မိန်းမလဲရရော ကလေး ၁၃ ယောက်မွေးတဲ့အပြင် ကလေး ၂ ယောက်မွေးစားထားသေး နောက်တချိန်တွေ့လိုပါသေး ဟေး..